RW Cabdi Weli iyo Wasiirada ku fekerka ah oo shir ay yeesheen ku ansixiyey Hindise Sharciyeedyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW Cabdi Weli iyo Wasiirada ku fekerka ah oo shir ay yeesheen ku ansixiyey Hindise Sharciyeedyo
18th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Xubno ka mid ah Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho, xilli ay gedooda ku dhaqaaneen 16 wasiir iyo 17 wasiir ku xigeen iyo wasiiru dowle.
Shirka golaha Wasiirada xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo uu shir guddoominayay Ra’iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah, waxaana xubnaha isu yimnid meel mariyeen saddex Hindise oo muhiim u ah hiigsiga cusub ee 2016-ka.
Wasiirka amniga Qaranka mudane Khaliif Axmed Ereg ayaa shirka ugu horeyn looga dhageystay warbixin ku saabsan amniga waddanka, wuxuu ka warbixiyey howlgalo amaan oo laga sameeyey Muqdisho.
Shirka golaha wasiirrada oo muddo saacado ah socday kaddib, ayaa waxaa Saxaafadda shir jaraa’id u qabtay, Ra’iisul wasaare ku-xigeen ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed.
Ridwaan Xirei ayaa faah-faahiyey muhiimadda guud ee shirkii maanta, wuxuuna sheegay golaha wasiirada la hor keenay 23-Hindishe Sharciyeed, ha yeeshee dood dheer kaddib, golahu waxa ay meel-mariyeen Hindiseyaasha kala ah: Xuduudaha iyo Federaalleynta, doorashooyinka iyo Miisaaniyadda dowladda sanadka 2015-ka oo dhammaantood loo gudbinayo Barlamaanka, ahna kuwa la jaanqaadaya Hiigsiga Soomaaliya ee sanakad 2016-ka.
Wasiir Ridwaan Xirsi ayaa wuxuu ka hadlay talo soo jeedin ka timid qaar ka mid ah Wasiirada ee ahaa inuu is casilo Ra’iisul Wasaaraha, isagoo xusay in arrintaas uu cad yahay, isla markaana Ra’iisul Wasaaruhu horay uga hadlay, waxaana uu qiray inay jiri karto kala aragti duwanaan.
“Wasiirkii aan la jaan-qaadi karin Shaqada Ra’iisul Wasaaraha, waxaa u furan inuu is casilo, Ra’iisul Wasaaruhu markaas wuxuu soo magacaabayaa Wasiirkii bedela”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka.
Mar uu ka hadlay go’aanka Xukuumada ee shirkii Baydhabo ee loogu doortay Shariif Xasan inuu noqdo Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed ayuu sheegay in Xukuumadu ay dib go’aan kaga soo saari doonto.
Akhri: Xubno cusub oo ka gedooday RW Cabdi Weli
Puntland oo soo dhaweysay doorashada madaxweynaha muranku ka jiro ee Koonfur Galbeed